कांग्रेस र कम्युनिस्ट पुराना भए नयाँ विकल्प हामी नै हौँ : डा. बाबुराम भट्टराई - NayaNepal News
Home अन्तरबार्ता कांग्रेस र कम्युनिस्ट पुराना भए नयाँ विकल्प हामी नै हौँ : डा....
कांग्रेस र कम्युनिस्ट पुराना भए नयाँ विकल्प हामी नै हौँ : डा. बाबुराम भट्टराई
नयाँ पत्रिका बैशाख २३, काठमाडाैं । दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ असोजमा नयाँ संविधान घोषणा भएसँगै डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी)को सदस्य र सभासद् परित्याग गरी नयाँ शक्ति पार्टी निर्माणको उद्घोष गरेका थिए । डा. भट्टराईले ०७३ सालमा गठन गरेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी, नेपालबीच सोमबार (आज) राजधानीमा एकताको सार्वजनिक घोषणा हुँदै छ । दुई पार्टीको एकतापछि बन्ने समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय संसद्को तेस्रो ठूलो शक्ति बन्दै छ । यसै सेरोफेरोमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईसँग नयाँ पत्रिकाका लागि सङ्गीत र दीपेश शाहीले गरेको कुराकानी :
संघीय समाजवादी फोरमसँग यतिखेरै एकताको महसुस किन गर्नुभयो ?
-हामी नेपालमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न चाहन्छौँ । राजनीति भनेको सम्बन्ध बदल्ने निरन्तर प्रक्रिया हो । हिजो १९/२०औँ शताब्दीको विश्वव्यापी लोकतान्त्रीकरणको चरणमा पुँजीवाद र साम्यवादका दुई धु्रव थिए । नेपालमा तिनका प्रतिनिधिका रूपमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उदय भयो । २१औँ शताब्दीपछिको चौथो औद्योगिक क्रान्तिसँगै हिजोका वैचारिक प्रस्थापनामा समयानुकूल परिमार्जन साथै समग्र समाजको गति, अर्थतन्त्र र सामाजिक परिवर्तनका नियमहरू र विचारसहितका राजनीतिक शक्तिको खोजी विश्वभरि भयो । त्यही आवश्यकताअनुरूप हामीले नयाँ शक्ति निर्माणको अभियान चलाएका हौँ । कांग्रेस र कम्युनिस्ट नामका जुन दुईवटा शक्ति छन्, तिनको विकल्पमा अग्रगामी, लोकतान्त्रिक, राज्यका जातीय, क्षेत्रीय विविधतालाई समेट्ने र उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने समाजवादी शक्ति निर्माण गर्ने प्रयास गरेका हौँ । यही क्रममा राजनीतिक वैचारिक हिसाबले सबैभन्दा निकटको शक्ति संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालबाट धुव्रीकरणको प्रक्रियाको सुरुवात हो ।
अरू पार्टीसँग पनि एकताका लागि छलफल चलेको हो ?
हो । हामीले सुरुमा नै के भनेका छौँ भने ०५२ सालसम्म आइपुग्दा एमाले र कांग्रेस दुई शक्ति नेपालमा स्थापना भए । तिनीहरूले लोकतन्त्रको प्रक्रिया पूरा गरेका थिएनन् । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेद र उत्पीडनको अन्त्य हुने गरी राज्यको पुनर्संचना गर्न माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो । त्यसैको बाइप्रोडक्टका रूपमा मधेस आन्दोलन उठ्यो र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । प्रकारान्तरले माओवादीको एउटा हिस्सा एमालेमा मिसिएपछि देश फेरि कताकता ०५२ सालकै कांग्रेस र एमालेकै ठाउँमा पुग्यो । पतनोन्मुख राप्रपाबाहेकका ०५२ सालपछिका अग्रगामी शक्तिहरूबीचको धु्रवीकरण गर्ने हाम्रो प्रयत्न हो । त्यसैको परिणामस्वरूप समाजवादी पार्टी नेपालको नाममा समाजवादी केन्द्र निर्माण गरेका छौँ, यसमा ०५२ सालपछिका शक्तिहरूलाई समेट्ने प्रयास रहनेछ ।
राजपासँग पनि कुराकानी गर्नुभएको हो ? राजपा पनि एकतामा आउने सम्भावना कत्तिको छ ?
हो । हामीले राजपा, जनमुक्ति पार्टी, थरूहट आन्दोलनसँग जोडिएका शक्तिहरू र एक तहसम्म विवेकशील पार्टीसँग पनि छलफल चलायौँ । फोरम र नयाँ शक्ति पहिलेदेखि नै छलफलमा भएकाले हामी छिट्टै निर्णयमा पुग्यौँ । तर, यी सबै शक्ति मिलेर एउटै समाजवादी केन्द्र बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ । यसका लागि हामीले चार मुद्दा बनाएका छौँ, संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद । पहिलो, संघीयता अर्थात् लोकतन्त्र र राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना । दोस्रो, देशमा सदाचार र सुशासन कायम गर्ने । तेस्रो, देशलाई आर्थिक विकासमा लैजान समृद्धि । र, चौथो समग्र गन्तव्य समाजवाद । यी हाम्रा आधारभूत मान्यता हुन् र यसको वरिपरि रहेका सबै शक्तिसँग एकीकरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।
यसअघि तपाईं समावेशी लोकतन्त्रसहित पाँच ‘स’ भन्नुहुन्थ्यो । अहिले ४ ‘स’मा पुग्नुभएछ ?
त्यो पाँच ‘स’ नयाँ शक्ति पार्टीले भनेको हो । अबको चार ‘स’चाहिँ नयाँ बन्ने समाजवादी पार्टी, नेपालले भन्ने हो । फेरि यसको विकास हुँदै जाने क्रममा यो बढेर ६/७ पनि हुन सक्छन् वा २/३ पनि हुन सक्छन् ।
वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न भन्दै तपाईंले तत्कालीन माओवादी छाड्नुभयो । वैकल्पिक शक्तिकै वकालत गर्दै विवेकशील र साझा पार्टी पनि बनेका छन् । उनीहरूसँग पनि एकताबारे कुरा भएको छैन ?
हामी सबैसँग छलफल गर्न खुला छौँ । एकथरीले संघीयताको मुद्दालाई मात्रै वैकल्पिक भन्ने, अर्कोथरी समृद्धिलाई मात्रै वैकल्पिक शक्ति बनाउने भन्ने साथीहरू छन् । हामीलाई नेपालमा चाहिएको पहिलो त जातीय, क्षेत्रीय विविधतालाई समेट्ने खालको वैकल्पिक शक्ति हो । दोस्रो, भ्रष्टाचार र सुशासनलाई अन्त्य गर्ने वैकल्पिक शक्ति हो । यी दुईवटै मुद्दामा टेकेर बन्ने समावेशी–समृद्धि अर्को आवश्यकता हो । एकात्मक प्रकारको मानसिकता नभएर समावेशी ढंगले आउने हरेक शक्तिसँग हामी छलफल गर्न तयार नै छौँ ।
तपाईं माक्र्सवादी विरासतमा बनेको नेता हुनुनुहुन्छ । अब बन्ने पार्टीको वैचारिक धरातल माक्र्सवादी नै हुन्छ या अरू केही ?
महाधिवेशनबाट हामी त्यो विषयको टुंगोमा पुग्छौँ । अहिले सम्मुनत संघीय समाजवाद नै हाम्रो वैचारिक आधार हुन्छ । समाजवादका विभिन्न अवधारणा छन् । माक्र्सभन्दा अघिको समाजवादी अवधारणा, माक्र्सेली समाजवादको अवधारणा, लेनिन र स्टालिनको समाजवादको अवधारणा, रोजा लक्जम्बर्गको धारणालगायत सबै अलगअलग धाराहरू छन् । यी सबै धाराभित्रका असल अवधारणालाई ग्रहण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ । सबै चीजलाई गतिशीलतामा बुझ्ने ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दार्शनिक पद्धतिलाई पनि स्विकार्छौँ । त्यसमा टेकेर समाजवादका परिभाषा र मोडेलको पनि सँगसँगै विकास हुनुपर्छ । माक्र्सले उठाएको विषयलाई मार्क्सवाद भन्दा पनि मार्क्ससेली अवधारणाका रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।
पछिल्लो समय तपाईंले माक्र्सवादको सट्टा ‘माक्र्सेली’ शब्द प्रयोग गर्न थाल्नुभएको छ । माक्र्सवाद र माक्र्सेलीमा के अवधारणागत भिन्नता छन् ?
मार्क्सले भन्नुभएको थियो– दार्शनिकहरूले संसारको अनेक तरहको व्याख्या गरे, तर मुख्य विषय संसारलाई बदल्नु हो । संसार गतिशील छ । भौतिक जगत, सामाजिक जगत, जैविक जगत र चेतनाका जगत गरी चार जगतलाई अलगअलग आयाम मान्ने हो भने यी सबै निश्चित रूपमा परिवर्तनशील छन् । त्यसो हो भने त्यसको समुच्चतालाई बदल्ने कुरा पनि त विकसित भएर जानुपर्छ होला । माक्र्सले त्यसको पद्धति सिकाएका हुन् । बनिबनाऊ फर्मुला उनले कहिले पनि दिएनन् । उनले त अहिलेको दुनियाँमा जे छ, त्यसको निर्मम आलोचना गर, समाजका अन्तरविरोधको हल गरेर नयाँ संरचना निर्माण गर भनेका हुन् । उनी आफैँले बन्दवादी प्रणालीको वकालत कहिले पनि गरेनन् । माक्र्सका अनुयायीले यसलाई धर्मशास्त्रजस्तो गरी ग्रहण गरे, त्यो अपूर्ण थियो । कतिले आफ्ना नामअनुसार वादहरू थप्दै लगे । त्यो २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा मार्क्सको पद्धतिविपरीत थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यसैले, मार्क्सले १९औँ शताब्दीमा भनेका कुरालाई अन्तिम सत्य मान्नुहुँदैन । २१औँ शताब्दीमा मान्य हुने गरी त्यसलाई विकास गरेर लिनुपर्छ । ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दार्शनिक पद्धतिमा टेकेर समाजवादका परिभाषा र मोडेलको पनि सँगसँगै विकास हुनुपर्छ
अहिले दुईतिहाइ मतको कम्युनिस्ट सरकार छ । प्रतिपक्षमा नेपाली कांगेस छ । यी दुवै पार्टी नवउदारवादी संसदीय व्यवस्थाका प्रमुख शक्तिका रूपमा छन् । नयाँ बन्ने तपाईंहरूको पार्टी नै वैकल्पिक शक्ति बन्छ भन्ने आधार के छ ?
ती दुवै पार्टीमा पूरै स्खलन छ । कांग्रेसभित्र वैचारिक स्पष्टता छैन । नेकपा भनेको खोल मात्रै हो । तिनीहरू पेप्सीकोला र कोकाकोला भनेजस्ता दुई फरक ब्रान्ड मात्रै हुन्, सारतत्व एउटै हो । हामी सारतत्व पनि अग्रगामी बनाउन चाहन्छौँ । वैचारिक हिसाबले पुँजीवाद र हिजोको अत्यन्तै कक्रिएको साम्यवादभन्दा माथि उठेर समुन्नत समाजवादको विचार विकास गर्छौँ । समाजमा विद्यमान वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्रलगायतका अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरीको सही अर्थको लोकतन्त्र चाहिन्छ । त्यसकारण समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादी राज्य प्रणालीको विकल्प हामी दिन चाहन्छौँ । त्यस्तै, नेपालको ठोस सन्दर्भमा जातीय, क्षेत्रीय विविधता छ र हिजोको एकात्मक राज्य प्रणालीबाट जुन ठीक ढंगको अग्रगामी संघीय संरचना निर्माण गर्नुपथ्र्यो ।
मधेसी, दलित, महिला, आदिवासी–जनजातिलगायतका माग पूरा गरेर राज्यको अग्रगामी पुनर्संंरचना हुनुपथ्र्यो । त्यसलाई हामीले पूरा गछौँ । यसरी लोकतन्त्रका बाँकी रहेका कार्यभार पूरा गरेर प्रशासनिक, न्यायपालिका, सुरक्षा निकायलगायतका संरचनाहरूको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना गरेर सुशासन, सदाचारको प्रत्याभूति हामी गर्छौँ । र, यसकै जगमा टेकेर अहिलेको गरिबी, बेरोजगारी र पराधिन अर्थतन्त्रलाई विकसित प्रकृतिको औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्छौँ । समृद्धिको प्रतिफल सबै वर्ग, जाति, क्षेत्रका जनतामा पु¥याउने गरी समावेशी समृद्धि हासिल गर्ने विकल्प हामी दिन्छौँ । यसरी समुन्नत समाजवादको दिशामा जाने समग्र सेटको सोचलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ । कांग्रेस र कम्युनिस्ट अब पुराना भइसके । २१औँ शताब्दीमा यो समुन्नत संघीय समाजवादी विचार र शक्ति नै विकल्प हो भनेर हामी प्रस्तुत हुन्छौँ ।
नेपालमा दुई पार्टीबीच एकतामा अध्यक्ष दुईजना बनाउने प्रचलन बस्यो । नेकपामा दुई अध्यक्ष हुँदा तपाईंले आलोचना गर्नुभएको थियो । अहिले तपाईंहरू पनि दुई अध्यक्ष प्रणालीमा जानुभयो नि ?
हामीले अलि उन्नत प्रयास गरेका छौँ । यो समाजवादी केन्द्र निर्माणको ढोका मात्रै भएको र अरूलाई पनि यसमा अटाउने विषयमा संवाद चलिरहेको हुँदा अन्तरिम समयका लागि हामीले दुई अध्यक्ष रहने प्रणाली बनाएका हौँ । तर, यो समानान्तर अध्यक्ष भन्ने होइन । एउटा राजनीतिक–वैचारिक विषयमा केन्द्रित हुने गरी संघीय परिषद्को अध्यक्ष भनेका छौँ । अर्कोले पार्टीको संगठनात्मक र अन्य गतिविधिको नेतृत्व गर्ने गरी केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष भनेर विधानमै व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसैले, यो समानान्तर नभई एकअर्काका पूरक हुन्छन् । त्यो पनि अन्तरिमकालका लागि मात्रै हो । भोलि गएर एउटा सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुने गरी हामीले संगठनात्मक जिम्मेवारीको पुनर्संरचना गर्नेछौँ ।
Previous articleकम्युनिष्टजनलाई क्रान्तिले के सिकायो ? हनीमून, बर्थ–डे र म्यारिज यनिभर्सरी पाटी
Next articleलामोसाँघु–जिरी सडक दैनिक पाँच घन्टा अवरुद्ध
पढाइ नभए पनि करोडौंको खाजा
टिंकर सडक बनाउँदै सेना
गाउँपालिका उपाध्यक्षद्वारा देवरलाई सरकारी स्कुटर प्रदान
के भन्छन् स्ववियुका उम्मेदवारहरुः नयाँ नेपाल न्युजले तयार पारेको रिर्पोट
‘युट्युबबाट सेक्स सम्बन्धि ज्ञान लिन्छु’